Nri na nri - Vondt.net - peeji nke 3 nke 16
AKUDKỌ: Walnuts nwere ike igbochi kansa eriri afọ
08 / 07 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
Nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ nyocha Ọrịa Mgbochi Ọrịa Cancer egosipụtara nsonaazụ dị oke mma maka ezigbo ihe kpatara ị ga-eji nwetakwu ụtọ. Ọmụmụ ihe ahụ gosiri, na nke mbụ, na iri walnuts nwere ike igbochi kansa eriri afọ ma rụọ ọrụ nke ọma na ahịhịa nje na afọ na eriri afọ. Nke a bụ akụkọ dị egwu ma egosighi ya mbụ!
Ọrịa cancer bụ ọrịa kansa na - egbu egbu nke, dị ka Ọrịa Cancer, si emetụta mmadụ 4129 na 2014. Nọmba ndị a na - arị elu na - arị elu n'ihe metụtara nri na - adịghị mma na ihe ndị ọzọ a maara na - akpata ọrịa cancer.
- Nchoputa ahu gosiri na walnuts gbochiri oria cancer
Ọmụmụ ihe ahụ nyere ụmụ oke ihe dịka 10% nke nri kalori ha na -eri kwa ụbọchị n'ụdị walnuts. Nke a bụ ihe dị ka mmadụ ole na ole. Otu n'ime ndị nyocha n'ọmụmụ ihe a, Dr. Rosenberg, kwuru na "nsonaazụ anyị na -egosi na nke mbụ walnuts nwere ike igbochi ma belata nhazi ọrịa kansa nke eriri afọ". Ihe a hụrụ na nsonaazụ ya bụ na walnuts na -enye aka na ahịhịa nsia dị mma site na -eme dị ka probiotics (na -akwalite ezigbo nje) - nke a butere eriri afọ na -enweta nchebe megide nhazi ọrịa kansa.
- Walnuts nwere ọtụtụ ihe na-akwalite ahụike
Walnut bụ otu n’ime mkpụrụ osisi kacha sie ike mmadụ nwere ike iri. Ha nwere nnukwu vitamin E na-egbochi antioxidant ma nwekwaa ọdịnaya nke polyunsaturated fatty acids n'etiti mkpụrụ osisi anyị na-erikarị na Norway.
- Mmetụta dị mma megide ọrịa ndị metụtara ndụ (n'etiti ndị ọzọ ọrịa shuga!)
Ndị ọrụ Walnuts gosipụtara na mbụ na ha nwere ike ịnwe ezigbo mmetụta na ọrịa metụtara ndụ dịka ọrịa obi na ọrịa vaskụla, ọrịa shuga na ọnọdụ akwara ozi. Nke a bụ aku nke ihe ka ọtụtụ n’ime anyị ga-erite uru na ịgbakwunye n’ihe anyị na-eri kwa ụbọchị.
Ozi oma! Nnyocha na-atọ ụtọ nke na-akwado mkpụrụ ahụ kwesịrị ịbụ akụkụ nke nri kwa ụbọchị n'etiti ọtụtụ mmadụ. N'ọdịnihu, anyị nwere olile anya na ha ga-enwe ike iduzi ụmụ akwụkwọ ọmụmụ ahụike ka ukwuu iji nye ozi ziri ezi banyere nrụpụta ọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụkwu gbasara ọmụmụ ihe ahụ, ị ​​ga - eme ya ya.
Ọzọkwa gụ: - 4 Uwe mmega megide Stiff Back
Ọzọkwa gụ: - Otu iko biya ma ọ bụ mmanya maka ọkpọ siri ike? Ee biko!
Nakanishi et al, 2016, Mmetụta nke ukpa riri na cocin carcinogenesis na microbial community planning. Ọrịa Cancer Prev Res (Phila). 2016 Mee 23. pic: canprevres.0026.2016. [Epub n'ihu mbipụta]
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Valnøtter.jpg?media=1648573622 499 750 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-07-08 17:09:532022-03-18 17:26:08AKUDKỌ: Walnuts nwere ike igbochi kansa eriri afọ
7 Mbido mbu nke oria oria abuo
07 / 07 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, Ọrịa na Ọrịa/av ewute
Ndị a bụ ihe ịrịba ama 7 mbụ nke ụdị ọrịa shuga 2 nke na-enye gị ohere ịchọpụta ọnọdụ ahụ na mbido ma nweta ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. Nchoputa nke mbu bu ihe di nkpa iji nwe ike igbusi mmepe nke oria shuga ma nweta otutu ọgwụgwọ na mgbanwe nri. Onweghi otu n’ime ihe ịrịba ama ndị a n’onwe ha pụtara na ị nwere ụdị ọrịa shuga nke abụọ, mana ọ bụrụ n’inwekwu ihe mgbaàmà ahụ, anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ GP maka ndụmọdụ gị.
Have nwere ndenye? Alala azụ iji igbe ikwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị Facebook ma ọ bụ YouTube.
Mgbe ahụ hụrụ na enwere oke shuga dị n’ọbara, nke na - apụta n’ụdị ọrịa shuga nke abụọ, ọ na - eme ka akụrụ aka bugharịa glucose a na mmamịrị - nke na - ebute mmepụta mmamịrị karịa. Nke a pụtara na ị ga-aga ụlọ ịwụ ahụ ọtụtụ oge na ikekwe ọbụna ọtụtụ oge n'abalị. Ọ bụrụ n’ịchọpụtala na ị na-aga ụlọ mposi ugboro ugboro yana ị na-amịkwu mamịrị mgbe mbụ ị ga-aga mposi, mgbe ahụ anyị na-agwa gị ka gị na GP kpaa maka nke a.
Ahụe mmiri na-agụ gị
Mkpụrụ ndụ glucose dị elu na-eduga n'ọrịa mmetụta nke ahụ. Dịka e kwuru, ọbara shuga dị elu na-eme ka ị hapụ mmiri ọtụtụ mgbe wee si otú a tụfuo mmiri mmiri - nke na - eduga na mmetụta nke nkụ n'ọnụ na na ị na - ahụ na ị na - enwekarị akpịrị ịkpọ nkụ karịa ka ọ dị na mbụ.
3. Ibu aro a na-atụghị anya ya
Mgbe a chọpụtara na ị na-arịa ọrịa shuga nke ụdị 2, sel gị anaghị enweta glucose zuru oke (n'ihi ọrụ insulin na-adịghị mma) - nke nwere ike ibute oke nha. Nke a yana ịmị mamịrị ugboro ugboro, nke bụ ihe na - egosi ọrịa shuga a na - achịkwaghị achịkwa, nwere ike iduga na calorie na mmiri mmiri, nke na - edugakwa nha.
4. Agụụ! Agụụ! Agụụ!
Ndị nwere ụdị ọrịa shuga nke abụọ nwere ihe akpọrọ dịka mgbochi insulin. Nke a pụtara na ahụ enweghị ike iji insulin tinye glucose n’ime sel. N'ihi nguzogide a, mkpụrụ ndụ akwara, mkpụrụ ndụ abụba ma ọ bụ anụ ndị ọzọ enweghị ike ịmịcha glucose n'ụzọ dị mma. Ahụ si otú ahụ na-agba mbọ idozi nke a site na pancreas (Pancreas) na-amalite ịmịpụta nnukwu insulin dị ukwuu iji kwụọ ụgwọ ịmịkọrọ glucose - nke pụtara na ndị nwere ụdị ọrịa shuga 2 nwere ogo insulin dị elu karịa ahụ . Ọ bụ ọkwa insulin a dị elu nke na-ezipụzi ụbụrụ na ụbụrụ na agụụ na-agụ gị.
5. painkwụ mgbu na ọrịa ụkwụ (ọrịa shuga neuropathy)
Ka oge na-aga, ogo shuga dị n'ọbara nwere ike ibute irighiri akwara ndị dị n'akụkụ ahụ - nke a na-akpọ neuropathy nke ọrịa mamịrị. Fọdụ nwere ike ịbụ ndị na-enweghị ntụpọ, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnwe nro, ịta ahụhụ, ịkwa ụfụ na mgbu na ụkwụ, ụkwụ na ogwe aka. Dị ka ọ na-adịkarị, ọrịa ogbu na nkwonkwo na-amalite n'ụkwụ ụkwụ ma na-arụ ọrụ n'ebe ahụ, na-ekwu okwu nke ọma. Ọnọdụ a na-apụtakarị na ndị nweworo ụdị ọrịa shuga 2 afọ 25, mana ọ nwekwara ike ịbịaru ndị nwere ọrịa ahụ obere oge karịa nke a.
Na-efe efe mgbe niile
Ihe kpatara na ndị nwere ụdị shuga 2 na-arịa ọrịa nje na yist ọrịa karị bụ na shuga dị elu na-enye ọnọdụ ndị a dị ezigbo mma. Yabụ, ndị ọrịa shuga typedị nke 2 metụtara nwere oke elu nke ero fungus, dịka ọmụmaatụ.
7. Ọhụụ, ọhụụ na-enweghị atụ
Nke a bụ otu n’ime ihe izizi izizi na ụdị ọrịa shuga nke abụọ nwere ike imetụta gị.Ọbara shuga dị elu na-agbanwe ikike lens iji gbanwee ụdị - ihe ọ na - eme, dịka ọmụmaatụ, na mgbanwe ọkụ. Yabụ ọ bụrụgodi na emerụghị oghere ahụ, akwara ndị dị n'akụkụ oghere ga-arụsi ọrụ ike ilekwasị anya. Mgbaàmà a nwere ike ime mgbe enwere mgbanwe ngwa ngwa n’ọkwa shuga dị n’ọbara.
Kedụ ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị oria afọ 2.
- Soro GP na-emekọ ihe ma mụọ atụmatụ maka etu ị ga-esi gbasie ike dịka o kwere mee, nke a nwere ike ịgụnye:
Ozi Ntuziaka Neurological maka nyocha nke akwara ọrụ gbasara nyocha enwere ike ịre ọria
Ọgwụgwọ site a nutritionist
Ma ọ bụghị ya, cheta na mgbochi bụ ọgwụgwọ kacha mma.
Peeji ọzọ: - Ọgwụgwọ ọhụụ maka Alzheimer nwere ike iweghachi ọrụ ebe nchekwa zuru oke!
Enwere ike ịkekọrịta isiokwu a na ndị ọrụ ibe, ndị enyi na ndị enyi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya ka aga-ezipụ dị ka dọkụmentị, anyị na-ajụ gị dị ka ma banye site na Facebook inweta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ọ bụ naanị ịkpọtụrụ anyị (kpamkpam kpamkpam).
Ọzọkwa gụ: - 5 ike uru nke ime plank!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/diabetes-type-2.jpg?media=1648573622 420 750 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-07-07 08:38:332022-03-18 17:26:037 Mbido mbu nke oria oria abuo
Peeji nke 3 nke 16<12345>»